Bob Kupbens, Mutevedzeri weMutungamiriri weApple Chitoro Online Anosiya Iyo Kambani | IPhone nhau
Bob Kupbens, mutevedzeri wemutungamiriri weApple Online Chitoro, akasiya kambani svondo rapfuura kuti anoshanda pane imwe kambani, masosi mazhinji ane chekuita neKupbens akatsigira. Kupbens akabatana neApple muna2014 panguva imwechete naAngel Ahrendts uye anga ari inoona nezve zvese zvirongwa zvakaitwa muApple Chitoro pamhepo seyakatsva kugadziriswazve, kubatanidzwa pamwe neiyo huru webhusaiti, iyo iPhone yekuvandudza chirongwa uye kubatana nezvitoro zvepanyama zvinowanikwa kwemavhiki mashoma.
Asati ajoina Apple, Kupbens aive mutevedzeri wapurezidhendi achitarisira bhizinesi. Delta Airlines kushambadzira kwedhijitari. Kupbens akauya kukambani panguva imwe chete naAngel Ahrendts muna2014, apo Apple yakatanga kutora vatungamiriri vekambani yepamusoro mukugadzirira kuvhurwa kweApple Watch uye bhizinesi maitiro ayo Apple aida kupa iyo kifaa.
Kupbens akatsiva Jennifer Bailey, parizvino ndiye Apple Mutevedzeri weMutungamiri anotarisira Apple Pay. Bailey haigone kudzoka pabasa rake rekare sezvo gore rino Apple iri kuwedzera huwandu hwenyika nezvibvumirano zvekukurumidza kuwedzera Apple Pay zvemagetsi kubhadhara tekinoroji. Parizvino Kupbens ndiye achangoburwa kusiya kambani mumakore achangopfuura. Vakuru vaviri vekupedzisira kusiya kambani vaive Bob Bridger naJerry McDougal.
Kuuya kwaAngel Ahrendts kwaireva kuvandudzwa kwakazara muboka revatengesi rekutengesa kusimudzira, kunyange zvakanyanya kana zvichibvira, kutengesa kuburikidza nepuratifomu yepamhepo, ichinyanya kukoshesa kuwedzera muChina, kubatanidzwa kwepamhepo uye kubhadharisa nhare. Sezviri pachena Kupbens haana kutevera mutsetse wakatarwa uye haana kuzadzisa zvinangwa kusangana. Parizvino hatizive kuti ndiyani achatsiva chinzvimbo chaKupbens, asi zvingangoita kuti Apple ichaita kusimudzira kwemukati kuti ikwanise kuzadza chinzvimbo ichi chitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Bob Kupbens, mutevedzeri wemutungamiriri weApple Chitoro pamhepo anosiya kambani
Screenshots yeiyo nyowani Apple Music yeTunes yakaburitswa